200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo ka hadlay Lacagta kasoo xaroota beerta Nabada,,, | Banaadir 24 online
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo ka hadlay Lacagta kasoo xaroota beerta Nabada,,,
Jul 2, 2017 - jawaab
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo warbaahinta kula hadlay Beerta Nabadda ee degmada Waabari ayaa waxaa uu sheegay in ay waddaan qorshayaal lagu mamnuucaayo lacagaha laga qaado Bulshadda Soomaaliyeed ee gudaha Beerta Marka ay galayaan .
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Beerta Nabadda ay tahay meel loogu tala galay in Bulshadda Soomaaliyeed ay damaashaad u yimaadaamn ,islamarkaana ganacsatada Beerta Nabadda laga doonaayo in ay hakiyaan lacagaha lagu galo beerta.
Waxaa uu sheegay Taabid Cabdi Maxamed in ay muhiim tahay in Bulshadda Soomaaliyeed aysan Beerta Nabadda u fahmin beerta Ganacsiga.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale xusay in beerta Gudaheeda Ganacsiyadda ku yaalla kaliya la ogol yahay in wax laga gado.
Bulshadda Soomaaliyeed ee damaashaad u taga Beerta Nabadda ayaa waxaa laga qaadaa lacago lagu gallo beerta Nabadda.